Bilaogera amin’ity herinandro ity: Elena Ignatova · Global Voices teny Malagasy
Bilaogera amin'ity herinandro ity: Elena Ignatova
Voadika ny 05 Mey 2018 4:24 GMT
Na dia tsy bilaogera ara-teknika aza ny Bilaogeran'ny herinandro androany, malaza ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Makedoniana amin'ny asany ao amin'ny Global Voices Online amin'ny teny Makedoniana izy, satria mpandika teny sy tonian-dahatsoratra ao izy. Ankoatra izay, tonian-dahatsoratra ao amin'ny Global Voices Albaney ihany koa izy, ary mpankafy mamaky bilaogy.
Elena Ignatova no anarany, 24 taona izy ary mpikatroka an'aterineto avy ao Skopje, afaka nihaona taminy nandritra ny Fihaonambe Median'olon-tsotra Global Voices tao Budapest izahay, ary niasa toy ny ambasadera tena izy ho an'ny fireneny niaraka tamin'ireo mpandray anjara maro mbola tsy nihaona tamin'ny olona avy ao Makedonia. Niresaka vetivety momba ny asany, sy ny fandraisany anjara ao amin'ny Global Voices ary ny tontolon'ny bilaogy Makedoniana taminy izahay, ankoatra ny zavatra hafa. Vakio hatramin'ny farany.
Elena miaraka amin'i Mialy, tonian-dahatsoratra GV avy ao Madagasikara, Cristina ao amin'ny Voces Bolivianas ary Catalina avy ao amin'ny Hiperbarrio (Sary nomen'i Sipakoa)
-Ahoana no fomba nanapahanao hevitra handika teny ao amin'ny Global Voices?
Namonjy fihaonambe tany Zagreb aho ary nihaona tamin'i Alice Backer izay nampahafantatra ny Lingua ary nitady mpilatsaka an-tsitrapo bebe kokoa mba handika teny. Mbola tsy nahare momba ny Global Voices aho taloha, saingy hitako fa tena mahaliana ny momba azy. Ka taorian'ny resadresaka fohy niarahana taminy, nanapa-kevitra hanomboka handika teny ho an'ny Global Voices amin'ny teny Makedoniana sy Albaney aho.
Rehefa hitako ny momba ilay tetikasa dia nieritreritra avy hatrany aho fa hanatsara ny votoaty antserasera Makedoniana sy Albaney amin'ny fampahalalam-baovao mahaliana, avy amin'ny vahoaka fa tsy avy amin'ny media. Etsy andaniny, fomba iray tsara hanehoana amin'izao tontolo izao ny zava-mitranga eto izany.
Tamin'ny voalohany, nieritreritra ny hanomboka amin'ny tranonkala Lingua Makedoniana ihany aho, saingy maro no nanolo-kevitra fa mety ho tsara amin'ny teny Albaney koa izany, noho izany dia nanapa-kevitra ny hanao ny roa tonta aho miaraka amin'ny fanampian'ny mpiara-miasa amiko.
-Oviana ianao no nanomboka ary olona firy no mandray anjara amin'ireo tranonkala roa ireo?
Nanomboka nandika teny tamin'ny Janoary tamin'ity taona ity izahay, ary iray volana taty aoriana ny famoahana ofisialy ny tranonkala. Amin'izao fotoana izao, mpandika teny efatra ho an'ny teny Makedoniana izahay ary iray ihany ho an'ny teny Albaney. Te-hitady mpirotsaka an-tsitrapo bebe kokoa aho, saingy sarotra foana ny mandresy lahatra ny olona mba hanao asa an-tsitrapo sy hitazomana azy ireo mba havitrika.
-Manao ahoana ny tontolon'ny bilaogy ao Makedonia, ary inona no olana lehibe mampiahiahy azy ireo?
Mavitrika kokoa ho an'ity firenena kely ity (manana mponina 2 tapitrisa i Makedonia), mieritreritra aho fa misy lahatsoratra 200 mahery isan'andro eo no mivoaka. Ny olana goavana resahan'ireo bilaogera dia ny politika nasionaly, OTAN, Gresy :).
Angamba ireo no olana goavana vao haingana satria nanatontosa fifidianana parlemantera izahay ary noho ny olana rehetra amin'i Gresy, momba ireo lohahevitra ireo ny ankamaroan'ny lahatsoratra nandritra ny volana vitsivitsy farany. Saingy ankehitriny rehefa milamindamina ny raharaha, manoratra bebe kokoa momba ny zavatra andavanandro sy ny mahaliana azy ireo manokana ny bilaogera.
-Bilaogera ve ny tenanao?
No, I'm just a blog reader. With my work, studies, translating for GV, etc. I really don't have time! I'm very active in other social media such as Facebook, but after the GV Summit in Budapest I'm seriously thinking of starting one 🙂
Tsia, mpamaky bilaogy fotsiny aho. Noho ny asako, ny fianarako, ny fandikan-teny ao amin'ny GV, sns. Tsy dia manam-potoana aho! Tena mavitrika amin'ny media sosialy hafa toy ny Facebook aho, saingy taorian'ny Fihaonambe GV tany Budapest, nieritreritra ny hanao bilaogy tokoa aho:)
-Inona no bilaogy tena ankafizinao?
Marobe ireo mahaliana, saingy raha misy olona te hamaky zavatra avy amin'ny tontolon'ny bilaogy Makedoniana, afaka mitsidika ny sehatra izay mampifandray ny ankamaroan'ny bilaogera Blogeraj izy.
-Inona no ataonao rehefa tsy mandika teny?
Miasa amin'ny ONG tsy miankina, tsy miandany antsoina hoe Metamorphosis aho. Ny tanjony lehibe dia ny fampandrosoana ny demaokrasia sy ny fahombiazana amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny toekarena mifototra amin'ny fahalalàna sy ny fiarahamonina vaovao ao Makedonia. Manao zavatra isan-karazany izahay, toy ny miasa miaraka amin'ny Creative Commons Macedonia, mampiroborobo ny fampiasana aterineto, ny olana momba ny fiainana manokana, sns. Ny anjara birikiko amin'ny Global Voices dia ampahany koa amin'ny asako miaraka amin'ny Metamorphosis.
-Nahoana ianao no mihevitra fa zava-dehibe ny mampitombo ny fidirana amin'ny aterineto sy ny media antserasera?
Zava-dehibe ho an'ny olona ny mahazo vaovao izay ilainy. Miaraka amin'ny aterineto sy ny fampahalalam-baovao an-tserasera, mora ny mahazo ny zavatra rehetra tianao, ary haingana kokoa. Ho an'ny mpianatra, zava-dehibe ny fampiasana ny aterineto ho loharano, saingy mihatra amin'ny olon-drehetra koa izany.
-Inona no ataonao amin'ny fotoana malalaka?
Mianatra momba ny siansa solosaina aho, manam-pahaizana momba ny aterineto sy ny teknolojia finday.
-Inona no irinao ho an'ny hoavin'ny tranonkala Lingua Makedoniana sy Albaney?
Mba hifandray ny roa tonta, mba hahafantaranao fa misy lahatsoratra nadika tamin'ny teny Makedoniana nadika tamin'ny fiteny Albaney ihany koa, na mifamadika amin'izany. Zava-dehibe ho an'ny olona any Makedonia ny mahafantatra momba ny dikanteny Albaney, mba hanomezana safidy azy ireo.
Raha mpampiasa ny teny Makedoniana na Albaney ianao ka te ho anisan'ny ekipa mahatalanjona misy azy ireo, na raha te-handray anjara ianao, dia mifandraisa amin'i Elena ao amin'ny elenaignatova [at] gmail [dot] com